I-Tapered Roller Bearings Factory - China Tapered Roller Bearings Abakhiqizi, abahlinzeki
Amabombo we-tapered roller ngamabhere ahlukanisekayo. Zombili izindandatho zangaphakathi nezangaphandle zesibambo zinemigwaqo emincane. Lolu hlobo lokuthwala luhlukaniswe ngomugqa owodwa, umugqa ophindwe kabili namarowu amane we-tapered roller bearings ngokuya ngenani lemigqa efakiwe. Umugqa owodwa we-tapered roller bearings ungathwala umthwalo osabalalayo kanye nomthwalo owodwa we-axial load. Lapho ukuthwala kuthwala umthwalo osabalalayo, kuzoveza amandla we-axial element, ngakho-ke okunye okuthwala okungathwala amandla we-axial ohlangothini oluhlukile kuyadingeka ukulinganisela.
I-tapered roller ethwala lolu hlobo lokuthwala iqukethe indandatho yangaphakathi, iringi yangaphandle kanye ne-tapered rolling element. Ngenxa yejometri yomklamo wayo, ama-tapered roller bearings angamelana nemithwalo ehlangene (i-axial ne-radial). Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kuvumela ama-roller ukuthi aqhubeke nokugingqika noma ngabe ashibilika kojantshi bamasongo angaphandle nangaphakathi.
I-engeli yokuxhumana ye-tapered roller ethwala umgwaqo we-raceway iyahlukahluka, okwenza isilinganiso se-axial kanye ne-radial load singasuswa kunoma yikuphi; lapho i-engeli inyuka, inamandla amakhulu wokuthwala i-axial.
I-tapered roller bearing ingohlobo oluhlukile lokuthwala. Ukuthwala nge-roller nendandatho yangaphakathi yezinyoni yakha ingxenye yangaphakathi, engafakwa ngokuhlukile ngendandatho yangaphandle. Amasongo angaphakathi nangaphandle we-bearing anemigwaqo emincane, futhi kufakwe ama-rollers athambile phakathi kwemigwaqo. Uma indawo eyindilinga inwetshiwe, isiqongo sobuso besigaxa sendandatho yangaphakathi, iringi yangaphandle ne-roller iyanqamana endaweni ye-axis ethwele.